Farmaajo waa nin quustay oo kaligiis aag cidla ah ka diriraya – (CCW) | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo waa nin quustay oo kaligiis aag cidla ah ka diriraya – (CCW)
Musharrax Madaxweyne, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, ayaa tallaabooyinka is-miidaaminta siyaasadeed ah ee Farmaajo qaaday ku tilmaamay kuwo mushkiladda ku sii kordhiyay Madaxweynihii hore, taas oo sababtay inuu quusto.
MUQDISHO, Soomaaliya – Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa Saddex qodob ku macneeyay tallaabada uu Maxamad Cabdullaahi Farmaajo qaaday, 6/09/2021 iyo 7/09/2021, si uu u difaaco ragg eedeysan oo ay ku socoto baaris maxakamadeed.
In uu dilka Ikraan Tahliil wax ka ogaa, maadaama uu difaacayo, xalayna uu xilal u magacaabay Fahad Yaasiin iyo Yaasiin Fareey oo ka mid ah seddaxda ruux ee lagu tuhunsan yahay dilka Ikraan Tahliil.
Caddaalad isku hor-gudbid (Obstruction of Justice), maadaama uu diiddan yahay in kiiska la baaro, oo laga gungaaro xaqiiqdiisa dhabta ah.
Abuuris qalqal amni iyo mid siyaasadeed, si ay doorashooyinku dib ugu dhacaan.
Hoggaamiyaha mucaaradka, wuxuu jawaab sax ah ku sheegay, in uu Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamad Xuseen Rooble, uu Farmaajo, ku eedeeyo in uu cadaaladda hor-taagan yahay, si loo daboolo kiiska Ikraan Tahliil, isla-markaana uu carqaladayn ku hayo doorashooyinka dalka.
“Ra’iisul Wasaaraha, waxaa laga rabaa in uu Taliye Bashiir xilka ku wareejiyo, xarunta NISA na geeyo. Guddigii uu baaritaanka u xilsaarna waa in ay tillaabo ka qaadaan shakhsiyaadkii hor istaagay baaritaanka oo ay Fahad iyo Fareey ugu horreeyaan”. Ayuu yiri Warsame.
Wuxuu xusay in Farmaajo uu dhagaha ka fureystay firriimaha dirtay Hooyo (Qaali Guhaad), Beesha ay ka dhalatay Ikraan, iyo shacabka Soomaaliyeed ee cadaaladda jecel, isla-markaana, uu indhaha ka dabooshay baaqii shalay ka soo baxay beesha caalamka.
“Haddaba waxaan ugu baaqayaa madaxda dawlad Goboleedyada, saraakiisha amniga iyo siyaasiyiinta rajada ama cabsida ka qaba in ay Farmaajo iyo Fahad awood la soo noqdaan, in ay indhaha kala furaan. Farmaajo waa nin quustay oo kaligiis aag cidla ah ka diriraya, ruux kasta oo doonta degaysa sii saarnaadana wuu la quusayaa”. Ayuu hadalkiisa sii raacsiyay hoggaamiyaha Wadajir.